Ingaba le ndiza izilawuli ehambelanayo?
kubalulekile Ingaba le ndiza izilawuli ehambelanayo?
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #504 by JanneAir15
Molo! Ngoko ke ndagqiba ekubeni kuthenga ze desktop yakho, esinezinyathelo okubhexa kunye lever umcephe wokunyusa. Nceda undixelele ukuba ezi izilawuli ehambelanayo? Kwaye ukuba ke xelela yintoni ingxaki kwaye unokucebisa into efanayo ke ngoko? Kunjalo uyakwazi zibonisa into enye nabaqondisi nokuba ezi ehambelanayo kodwa ulwazi lwakho Ndingathanda ukufumana le iseti phantsi 300 € kwaye kufuneka iqulathe zontathu: desktop, wokujika zinyathelo kunye umcephe lever.
- Thrustmaster T16000M asekunene
- Logitech mouse Pro ihamba Flight iphini
- Logitech mouse Pro Flight umcephe ikota yesangqa
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #505 by Gh0stRider203
Ndiqinisekile ukuba ukuba ehambelanayo, nangona ukuba ngokwenene ufuna ukuhlela elungileyo, ukufumana i icons X55. Loo nto nje enkulukazi. OKUBUHLUNGU kukuba, ukuba kobubanzi My ixabiso (nje malunga nantoni na kobubanzi ixabiso sam sokunene ngoku, ngelishwa ~ uyancwina ~)
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #506 by JanneAir15
Kulungile. Kodwa ndicinga ukuba ukuba yonke ehambelanayo kuba ndiza ukuthenga Logitech Extreme 3D desktop Pro kwaye ngoko bonke bephela Logitech leyo lula ngoko kwaye ngakumbi kusenokwenzeka ehambelanayo.
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #507 by Gh0stRider203
Ndandidla ukusebenzisa i icons zilungiswe x45, kodwa UKUBA ukuba imali ... ndandidla SO ukufumana X55 uVuyo. Ungathi kengoku kwazi nokuba kufuneka ukusebenzisa keyboard ngexesha moya ngaphandle mhlawumbi athethe ATC.
Intonga, umcephe kunye zemithi yokujika (kwi kwelasemva icala umcephe) kwaye kengoku kufuneka nje ukusebenzisa 1 USB port
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #510 by JanneAir15
yababini Nice kodwa ndithanda ukuba amaphini okugwedla kulawulwa ihamba ngoko ndiza le:
-Logitech Extreme 3D Pro desktop
Enkosi ngoncedo nakuba!
Ixesha ukwenza page: 0.500 imizuzwana